Maitiro eArtificial Intelligence ari kuvandudza Unobatsira Tekinoroji - NewGenApps
AI, chakagadzirwa Intelligence, Inobatsira Technology, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Maitiro eArtificial Intelligence ari kuvandudza Anobatsira Tekinoroji
AT - Inobatsira Technology Ndidzo nhau kweanopfuura makore gumi. Makambani mazhinji uye vanhu vakasvitsa ino nyika iine dzimwe pfungwa dzinopururudza uye dzimwe nzira dzekuchinja hupenyu dzinogona kuve zvigadzirwa zvemagetsi kana michina. Chinangwa chikuru chekufambira mberi kwakadai kuita kurarama nekukurumidza uye nyore. Pamusoro peizvi, zvave kuita kuti hupenyu hwemunhu akaremara huve nyore. Kunyangwe padiki padiki, pane akati wandei madiki madiki emidziyo ayo anoshandiswa zvakanyanya senge vanoshandisa izwi, anotaridzika anotariswa monita, mawadhi akangwara zvichingodaro.
Zvino, mune inogara ichichinja nyika, kune zvakawanda zvakafambira mberi muhunyanzvi izvo zvinoitwa anenge mazuva ese. Mumamiriro ezvinhu akadaro, teknolojia yekubatsira haisi kure kumashure nekuti iri kugadzirisa chakagadzirwa Intelligence mune zvakatipoteredza dzimba nedzemahofisi zvichiita kuti hupenyu huve hwakanaka uye huve nerunyararo.
Kuteedzera kweAI mune anobatsira tekinoroji
Kana isu tikatora iyo inonyanya kufarirwa kunyorera kweAI munguva yanhasi saka zviri pasina mubvunzo marobhoti. Ivo anoshandiswa mumatunhu akasiyana siyana kana nevanhu kuti vakunde akasiyana akasiyana hurema, kunyanya kune vanhu vanogara vega. Iyo inoshandiswa nevanhu pamba inozivikanwa semarobhoti epamba uye akagadzirwa mune zvakasikwa. Mumwe anogona kuzvisarudzira maererano nehurema kana chinodikanwa chemunhu. Mumashoko akareruka, uku kugadzirisa kwakazara kuita shuwa kuti AI nevanhu vari mukubvumirana zvakanaka nemumwe.
Chakagadzirwa Intelligence eBook
Icho chingori muenzaniso wekushandisa AI mune iyo teknolojia yekubatsira izvo zviri kuita kuti hupenyu hwevanhu huve nani. Aya marobhoti epamba anogona kuita mabasa akakosha sekuita mafoni ekukurumidzira kana mamiriro ekurapa akamuka, kuteedzera kugadzwa nemishonga, uye zvakare kuzivisa mumwe nemumwe nezvemazuva akakosha. Pamusoro peizvi, kune akawanda mafambiro epamusoro emarobhoti ayo anogona kudzora zvirinyore zvemagetsi kumba.
Anobatsira matekinoroji achishandisa AI
Kunze kwerobhoti - Ruoko Rwekubatsira - iyo inoshanda kune akaremara munhu, kune akati wandei mimwe mienzaniso inoshamisa yeiyi tekinoroji zvese nekuda chakagadzirwa njere, zvinhu ouinjiniya uye robhoti. Heano mashoma emhando yepamusoro fomu yekushandisa ye Inobatsira Technology.
Kana isu tikataura nenzira yematambudziko mukuona saka pane nzira dzinoverengeka dzinoshandiswa dzakadai semalensi uye magirazi. Ivo vanobatsira mukushanda pamwe nekuchinjika uye kusiyanisa kwechiedza mwenje kuve nechokwadi chekuti tarisiro yekugona kweziso kwadzoreredzwa. Nekudaro, munguva iyo mafoni uye mota dzinozvifambisa dziri kutora, tinogona kuita zvirinani kupfuura izvozvo.
Nekuda kweizvozvo, isu tiri pano nemagirazi akangwara ayo anogadzirwa nechikwata cheUniversity yeOxford, UK, kusanganisira maurososiositi uye musayendisiti wekuona wemakomputa. Vakavaka iyo Augmented reality glass that focuses on a specific part of sight. This has increased the contrast of the image and has highlighted their features with the help of AR. This project will be on the market in the coming year and Google is helping with the research work while investing $658,000 grants on it.
Kuchenjera Kunzwa Kubatsira
Isu tinonyatsoziva zvekunzwa zvishandiso zviri pakati pedu kwemakore mashoma ikozvino. Zvino, iwe unogona kungofungidzira chishandiso uko chisingangokubatsire iwe kungonzwa ruzha asi chinokwanisa kukwira mumafungu ehuropi kuti uone izvo chaizvo zvinoda kuteerera. Huye, haichisiri chikamu chemafungiro ako sezvo izvozvi Columbia University Chikoro cheUinjiniya neApplied Sayenzi Vatsvagiri vaita chokwadi, kana ivo vari kuyedza.
Mudziyo unogona kuteedzera ako mafungu europi uye kuverenga zviitiko zvehuropi izvo zvinogona kuona iro izwi munhu ari kuda kunzwa zvakare. Izvi zvakanakisa mune kesi apo vanhu vazhinji vari kutaura panguva imwechete uye vanhu vakavhiringidzika. Chikwata parizvino chiri kuyedza kuuya nenzira dzekuvandudza mudziyo wakadai. Saka, ikozvino iwe uine tarisiro yerunako rubatsiro rwekunzwa.
Chirwere chePasinson Kuenzanisa kushanda
Ivo vanoshandisa bhanhire iro rakaumbwa neanodedera maactuator ayo anogona nyore kuisa mepu chaiyo-nguva kufamba kwemushandisi. Iyo data yakaunganidzwa inobatsira mukutungamira murwere nemaexercise ayo anobatsira mukuwedzera kuvimba uye kugadzirisa kugadzikana kwekumira zuva nezuva. Izvi zvinogona kubatsira zvakanyanya kusvika sainzi anogona kuuya nemushonga nekurorazve maseru ehuropi.
While talking about physical disabilities, there are so many daunting things in it then we can assume such as trapped in own body with an active mind but no capability to speak or move, even communicating physically is pressurizing. On top of that, locked-in syndrome doesn’t have any cure. However, technology has some tricks down their sleeves that depends on brain-computer interface technology. With the help of such technology, one can easily respond to question in a no or a yes with only thoughts. The machine is made up of some smart kudzidza tools and electrodes that can give an accuracy of over 80 per cent.
Kune matsi, mutauro wemasaini ndiyo nzira huru yekutaurirana nevamwe. Nekudaro, sezvazviri chokwadi, munhu wese haana kunaka nemutauro wemasaini. Huzhinji hwevanhu havatomboziva kuti hafu yechiratidzo inorevei uye haisi munyika imwe chete asi pasi rose. Nekudaro, tekinoroji iri kuyedza kubatsira mune dzakadai zviitiko zvakare.
Makambani ari kuuya nechinhu chinogona kushandura mutauro wemasaini kuita zvinyorwa kana izwi kuti zviite kuti zvinzwisiswe nevamwe vanhu. Aya majaira anosanganisira ye3D kamera iyo inobatsira mukutevera kufamba kwemuviri nemaoko ekusaina pavanenge vachiedza kusaina zvirevo. Panyaya yekurongeka, iri 98 muzana rakaringana neye beta vhezheni yatove mumusika.
Inobatsira tekinoroji iri kuyedza kushandura hupenyu hwepamoyo nehunyanzvi. Matsi inokwanisa kunzwa muchimiro chekufambira mberi, bofu rinogona kuona uye kunyange munhu akaoma mitezo anogona kufamba. Izvi ndizvo zvishoma zvezvinhu zvinogona kugadziriswa kumusoro nerubatsiro rweAT. Nemazano matsva uye kumisikidza kweAI, isu tinogona kuitora kune iyo nhanho nyowani yevakaremara vanhu. Mhinduro dzacho dzinoshamisa pasi pebhajeti uye dzinoshanda seimwe nzira huru kune echinyakare mazano. Zvino, vaongorori vanongofanirwa kushanda mukushandisa kweAT mune yakawanda-yepamusoro fomu iyo inogona kubatsira pasi rese.
Unoda AI application? Taura nekutaurirana.
7 Dzakadzika Dzidzo Nzira Ose Anofarira Ai Anofanira Kuziva
Oct 4 | chakagadzirwa Intelligence, Kudzidza zvakadzika